Waa kuma hogaamiyaha "Xisbullaha Nigeria"? - BBC News Somali
Waa kuma hogaamiyaha "Xisbullaha Nigeria"?
Bishii ina dhaaftay ee Oktoobar dabayaaqadeedii waxa iska hor imaadyo rabshado wataa ku dhex mareen magaalada Abuja milatariga Nigeria iyo taageerayaasha ururka Dhaqdhaqaaqa Islaamiga ah ee uu hogaamiyo Ibrahim Zakzaky, waxaana halkaa lagu dilay saddex qof oo ka mid ah taageerayaasha ururkaas.
Hadaba waa kuma hogaamiyaha ay dadkani u mudaharaadayeen sii dayntiisu?
Ibrahim Yacquub Zakzaky waxa uu ku dhashay magaalada Zaria ee Muslimiinta Shiicada ah ee Nigeria u ah magaalada barakaysan sanadkii 1953.
Waxa uu la dhacay aragtidii mufakirkii reer Masar, Sayid Qudub, iyo tii hogaamiyihii sare ee Kacaankii Islaamiga ahaa ee Iran, Aayatullaah Al-Khumayni, waana sababta uu uga aasaasay Nigeria ururkaa islaamiga ah.
Waxa uu ahaa hogaamiyaha ruuxiga ah ee ururkaa tan markii uu ardayga ahaa ee uu ku jiray jaamacadda, waagaas oo ay dalka aad ugu badnaayeen aragtiyaha hanti wadaagga iyo hanti goosadku.
Nigeria: 55 qof oo ku dhintay iskudhacyo u dhexeeya Muslimiin iyo Masiixiyiin
Maxbuus 100 sano jir ah oo sugaya xukun dil ah
Suxufiyiinta [dalkaas] qaarkood ayaa ururkaa uu hogaamiyo Zakzaky ku tilmaamay "Xisbullaahiga Nigeria", sababtuna waa ururkaa oo fidinayey mad-habka Shiiciga tan iyo markii la riday boqortooyadii Iran sannadkii 1979-kii, iyo mid labaad oo ah in uu aaminsanyahay in ay jiraan fursado jamhuuriyad la mid ah Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran lagaga abuuri karo Nigeria.
Khabiir ka tirsan hay'adda wax ka qorta qulqulatooyinka aduunka ee ICG oo ku sugan Nigeria ayaa waxa uu sheegay in ururku leeyahay laba ujeeddo oo ta koobaad tahay in la helo fursad lagu abuuro nidaam maamul oo ku dhisan shareecada Islaamka oo adag iyo ta labaad oo ah in Nigeria laga dhiso dawlad Islaami ah.
Sanadihii sideetameeyadii iyo sagaashameeyadii ee qarnigii hore ayaa xukuumadihii milatariga ee Nigeria ay Zakzaky dhawr jeer u xidheen eedo ah kicin dadweyne. Haatanna waxa uu ku jiraa xabsiga muddo saddex sanadood ah sidaas oo ay tahayna ururku weli hawlihiisa wuu wadaa.
Dad u mudaharaadaya sii daynta Zakzaky
Tirada Shiicada Nigeria waxa lagu qiyaasaa malaayiin qof, sidaas oo ay tahay ayaa hadana ay yihiin qolyaha laga tirada badan yahay marka la barbar dhigo Sunniga iyo dadka kale ee aan Muslimiinta ahayn.
Madaxa urur talo bixineed oo la yidhaa Afrique Consultancy Group oo Afrika oo dhan ka hawl gasha ayaa isaga oo ka hadlaya Shiicada Nigeria waxa uu yidhi " Shiicadu si fiican ayay dadka kale ee reer Nigeria ula falgaleen lagumana hayo dhibaatayn iyo takoor toona, laakiin xidhiidhka taageerayaasha Sheekh Zakzaky iyo ciidamada nabadgelyadu weli wuu cakiranyahay.
Waxaanu intaa ku daray in la moodo in uu jiro loolan gaara oo ka dhexeeya bulshada ku nool magaalada Zaria gaar ahaan hogaamiyaha ururka iyo ciidamada nabad gelyada.
Ciidamada Nigeria waxa ay hore u weerareen guriga uu deganyahay Zakzaky waxaana halkaa ku dhintay dad, kuwii ku dhaawacmayna waxa ka mid ahaa xaaska Zakzaky, wiil uu dhalay, kaaliyihiisii iyo dhakhtarkiisa gaarka ah, waxaana gebi ahaan ba dhulka lala simay maqaam ay halkaa ku laaayeen.
Taageerayaasha Zakzaky waxa kale oo weeraray, mar ay socod mudaharaad ah ugu kala socdaalayeen magaalooyinka Kanu yo Zaria, qof miidaame ah oo isku qarxiyey waxaana halkaa ku dhintay tiro aan ka yarayn 21 qof.
Markii qaraxaasi dhacay waxa sheegatay masuuliyadiisa Boko Xaraam, laakiin waxa beeniyey taageereyaasha Zakzaky oo sheegay in weerarkaasi ahaa mid ay ku duqeeyeen diyaaradaha ciidanka Nigeria.
Qulqulatooyinka dhex maray ururkaas iyo ciidanka Nigeria waxa ka mid ahaa mid ka dhacday bishii Juulaay ee 2014 goob ay xaflad diineed ku dhigayeen Shiicadu, halkaas oo lagu dilay dad aan ka yarayn 34 qof oo ay ka mid ahaayeen xubno ka tirsan qoyska Zakzaky. Waxaanay sidoo kale dhigayeen dadkaa askartu laysay mudaharaad lagu taageerayey Falastiiniyiinta oo dhacayey maalinta loo asteeyey "maalinta taageerada caalamiga ah ee Quddus".
Boodh ku yaal barta laga galo magaalada Zaria
Boko Xaraam kale
Maxamed Sacad Abuubakar oo ah hogaamiye ruuxi Islaamiya oo Nigeria laga qaddariyo, ayaa maamulka u digay waxaanu ugu baaqay inuu is xakameeyo si looga baaqsado buu yidhi in ay soo baxdo koox kale oo hubaysan oo la mid ah Boko Xaram.
Waxaanu Maxamed Sacad intaa ku daray oo yidhi "duruufihii dhaliyey in ay Nigeria ka abuuranto fallaago hubaysani weli way taaganyihiin, masiibada ka dhalatayna weli waa lagu jiraa"
Ururka Dhaqdhaqaaqa Islaamiga ah waxa ka goostay Abuubakar Mujaahid oo aad ugu dhawaa Zakzaky sanadkii 1995-kii waxaanu aasaasay urur la yidhaa Soo Noolaynta Islaamka, kaas oo ka soo horjeeda aragtida Zakzaky.
Waxaana la sheegayaa in Zakzaky uu isago qabo in aanu uurkiisu qaadan hubka in kasta oo ay dhaceen iska hor imaadyo dhex maray ciidanka nabad gelyada iyo urur kale. Waxaa kale oo la sheegay in suurto galnimada ururka Zakzaky xag jirnimada ugu baydhi karaa ay weligeed ba ahayd mid aad u yar.
Laakiin marka la eego qulqulatooykii ugu dambeeyey ee dhiiggu ku daatay ee lagu laayey xubno sarsare oo ka mid ah ururka, xadhiga hogaamiyahooda dhaawacan iyo sidoo kale duminta xarumahooda waxa dhici karta in uurku gaadho meel cidhiidhi ah oo laga yaabo in uu hubka ba qaato.
Gabadh Soomaali ah oo indhaha naafo ka ah oo kaalinta koowaad ka gashay Imtixaanka Dudiga Dhexe